Union Minister U Kyaw Tin receives Deputy FM of Czech Republic – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin receives Deputy FM of Czech Republic
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received Mr. Martin Tlapa, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic at2pm on6March 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially discussed matters pertaining to the promotion of bilateral relations and cooperation, trade and investment and issues of common interest. The Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic handed over an invitation extended from the Prime Minister of the Czech Republic to the State Counsellor to pay an official visit to the Czech Republic atamutually convenient time. The Myanmar side also informed about the arrangements being made for the opening of its diplomatic mission in Prague in order to promote bilateral relations and cooperation between the two countries.
After the meeting, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar and Mr. Martin Tlapa, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic signed the Memorandum of Understanding on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
According to the MoU, annual consultations between the two foreign ministries will be conducted for the advancement of bilateral relations and cooperation at the multilateral fora as well as enhancement of mutually beneficial cooperation in the areas of trade and investment, science and technology, culture, sport, education and tourism.
The Union Minister for International Cooperation hostedaluncheon to the Czech delegation at the Park Royal Hotel in Nay Pyi Taw.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Tlapa အား ၆-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၄၀ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် နှစ်ဖက်အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် နှစ်ဖက်အဆင်ပြေမည့်အချိန်တွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် လာရောက်ရန် ချက်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဖိတ်ကြားစာကို ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာဘက်မှလည်း နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ပရာဂ့်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကိုလည်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် မြန်မာ-ချက် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Tlapa တို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအပြင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ ပညာရေးနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား စသည့်ကဏ္ဍရပ်များတွင် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နှစ်စဉ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ ပက်ခ်ရိုင်ရယ်ဟိုတယ်၌ နေ့လယ်စာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။